Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "yakarembera murume", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "yakarembera murume", iro shamwari manzwiro?
Card of "yakarembera murume" zvichireva
nyanzvi pakati 3500 Yen kuti kufembera uye wakasununguka yokunyatsoongorora kuwana nzira
"The akamuturika Man" iri neizvi chinzvimbo, mweya anozvipira rudo achaita kuti vamwe vebato kupfuura zvavo , kuzvitsaurira, ndiye nhindi, zvinoreva kuzvipira. Zvisinei, vane zvinoratidza kuti mvura anokumhan'arira uri murudo asi unogona kunewo chokuita hwokuzvipira kuri mairi, zvakadai kuita uye manzwiro vakazvipira vari mubayiro rimwe zuva, pakupedzisira mufaro wangu mukuru kushanyira I kadhi kuti.
akanaka chinzvimbo "The Man akamuturika" zvakanaka nzvimbo musoro vaya vane manzwiro "munhu yambomiswa"
hwehama yauri guessing, kuedza pari kuitwa mabasa, vari mubayiro munguva yemberi iri pedyo zvinoreva kuti hombe inofadza kushanya. Parudo, kana kwete kuita kuti iye, vangada ndechokuti iye inobatsira ndezvechokwadi.
Chii chinorehwa kadhi iri, pane kuti izvozvo achaita mamwe bato ravo kuti manzwiro vari mubayiro, vamwe chiito kuti achaita kuti vamwe mubato, rine nguva dzose kufara uye kugutsikana manzwiro haina.
Kana kadhi iri vakabuda, nokuti inogona kutsvaka kuchinja, ungada kutsigira vari sezvo pedyo sezvinobvira. Ndiye isu akaona vakadaro pamberi penyu.
Somuenzaniso, haana ajaira kunzwa yokuwana rudo itsva chete karambana yepakutanga Kano, kana ajaira kunzwa kuti pakupedzisira bvisai kuti rudo mutsva, kana akanga pakupedzisira sokuti kuona nyaya muchato uye ave kudanana nokusingaperi, shamwari mumwe aiva ndakanga kungava mukana kujaira kwaari uye anoda inosvika kadhi iri, nokuti chiratidzo chokuti ane iwe manzwiro akanaka, ipfungwa yakanaka kusvika kuurawa vanobatana maoko zvaitika.
"The akasungirirwa Munhu" nezvimwe manzwiro kuti harungashandurwi chinzvimbo Vanzveri kureva
_x000 Reverse chinzvimbo D_ "The akamuturika Man" iri, saka kure Toka kuita uye kuzvitsaurira kuchaguma somumvuri achiedza, uye saka kure uye kuti zvaakaita akatarisirwa, zvinofamba zvakafanorongwa kuti yakasiyana zvachose mirayiridzo zvinoratidza kuti. Sezvo
manzwiro ake anoda kana rusina kukwana mberi rudo pane mukana kuti kurutivi kumwewo ndechokuti iye, iye akasatadza zvichida haafariri rudo ikozvino chete pamwe. Kana usingadi kuputsa ukama ano, nokuti yakachengeteka zviri nani nerudo kwete rakawandisa chikumbiro, kuti aizova chakanaka pezvaaitsigira neshamwari apo nokuchengeta zvishoma kure.
kuti kune nguva dzose pedyo nzvimbo, ipfungwa yakanaka kumirira njodzi kuerera zvichachinja.
Kana neizvi nzvimbo iri kunze "The akasungirirwa Man", uyewo nesimba kana kuzvitsaurira kune mumwe webato, zvakakosha kuongororazve kuterama mamiriro ezvinhu uye yavo chinangwa. Achifunga zvakapfuura, chikamu kuti anogona kuva kufungisisa zviri kukwanisa kuratidza, inotungamirira veza kunze njodzi remangwana.